Kwizinsizakalo eziphuthumayo. Isevisi ephuthumayo kukagesi. Isevisi ephuthumayo ukwelashwa amanzi isitshalo
Homeliness, Ukuphepha ekhaya
Nokho, uma indlu zonke izinto zokuxhumana nabantu ayisebenzi kahle. Nokho, ngokuvamile kuba khona ukwehluleka kwenzeka kwi imigqa amandla noma igesi (amanzi) ipayipi. Eminyakeni yamuva kwaba izinhlekelele okuvamile futhi kuvumelane zemvelo eziye zabangela umonakalo hhayi kuphela zokuxhumana, kodwa futhi abantu. Ukuze kuqedwe wonke amaphutha, imiphumela yabo futhi ukusindisa izimpilo, futhi kudingeka kwizinsizakalo eziphuthumayo. Phakathi kwazo kunabafundi igesi, lokusindisa, futhi inhlangano ukulungisa yamanzi amapayipi kanye negesi imigqa.
Uyini zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo, futhi ukusebenza kanjani?
Ukuze uqale, ake ukubhekana lo mqondo. amasevisi eziphuthumayo - ifomu ekhethekile, okuyinto bekulungele ukuya endaweni ukuwohloka noma isimo esiphuthumayo futhi ukukulungisa. Njengokulindelekile, bonke ezokuthutha kanye lobuchwepheshe izindawo lalawa maqembu kufanele ibe ukusebenza amahora angu-24 ngosuku.
Ukuhanjiswa Izikhungo Kumele bente Umsebenti imisebenzi elandelayo:
Gada inkonzo izindawo kusenesikhathi iloli noma eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa.
Phendula ngokushesha ukuze izikhalazo zezakhamizi. Okungukuthi ukulungisa iqembu kumele ngokushesha ushiye inselele ukuthola imbangela yokwehluleka futhi uqede ke.
Ukufeza imithwalo yabo yemfanelo ekusindiseni ukuphila impilo yomuntu, impahla yakhe nokuqedwa ngezimo ezisheshayo nemiphumela yabo.
Ngokwemvelo, service ngalinye uhlu lwemisebenzi olucacile.
Ubani ongafaka nethimba?
Bonke abasebenzi kumele kube ofanelekayo futhi abe ukuqeqeshwa esanele theory kanye nama-practical. Kubaluleke kakhulu izimfanelo zokuziphatha kwabasebenzi. Ngokwesibonelo, kufanele azame kunoma isiphi isimo ukuhlinzeka ukunakekelwa okungcono kakhulu abangakuthola.
Futhi gasman, futhi ugesi, futhi abatakuli kufanele abe nemfundo othile okhethekile. Okubalulekile kuyinto esigabeni efanele isisebenzi. Bonke abasebenzi kumele bazi ukuthi uyena obangela ukuphila impilo zabantu, ngakho-ke kufanele baqikelele imisebenzi yabo.
amasevisi aphuthumayo zigcwaliswe ngabantu engaphezu kwengu-18. Nabo isivumelwano umsebenzi, okuyinto sicacisa imisebenzi yabo, amalungelo, inkokhelo kanye nezinye izimo. Kukhethwa ikakhulu abantu ubuqotho eliphakeme psyche nemithi, ikhono isebenze kahle esimeni esiphuthumayo, kanye nedatha enhle engokomzimba. Ngokwesibonelo, ukuze abe wababhukudi, kubalulekile ukuthi wezifo futhi udokotela wezengqondo waqinisekisa ukuthi indoda abafanelekela inkonzo enjalo.
Izici Electricians lochwepheshe
Ngakho manje sixoxa ngokuningiliziwe nge imisebenzi yesevisi ngalinye ngokuhlukile. Uma wazi ukuthi ukushintsha isibani - kuhle. Nokho, akubona bonke abakwazi futhi banelungelo zama ukubeka wiring entsha noma kulungiswe inkinga ngesikhathi line isikhungo. Lokhu iphatha zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo grid. Kukhona ochwepheshe abafanelekayo, vetted futhi ube isipiliyoni esiwusizo.
Ukuhanjiswa Izikhungo yenza imisebenzi elandelayo:
nganoma yisiphi isikhathi sosuku uya izingcingo eziphuthumayo ukuze aqede noma yikuphi amaphutha emgqeni isikhungo noma wiring ekhaya lakho;
wenza ukulungisa noma esikhundleni izintambo zwe emizini yabazalwane, ezindlini kanye izindawo zezimboni;
usungula Ukuvikelwa: izinzwa, stabilizers, ugesi;
It uyakufakazela ukuthi imigqa amandla, uveza uphethwe ngokugcwele noma kancane;
iqoqa futhi uqoqa panel; Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe ukuxhuma ntathu ezisebenza ngogesi (isitofu zokupheka, amanzi ashisayo).
Izici service igesi
Kumele kuqashelwe ukuthi umsebenzi kule nhlangano can kuphela abantu abazi ubuchwepheshe imisebenzi igesi-enobungozi. Ngaphezu kwalokho, kufanele ukwazi ukusebenzisa igesi buso nezinye izinto zokuzivikela.
Cabanga imisebenzi eyisisekelo ukuba kwenziwe ngabantwana igesi zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo:
Ukuqinisekisa ukusebenza kahle futhi ephephile emikhulu kanye namapayipi, kanye nezinye izinto zokusebenza.
Okuqhubekayo isimo zokuqapha kwemigomo igesi ongena ohlelweni.
nampendulo esheshayo isikhalo sabantu kanye nokulungiswa imishini, ukukhanda ukuvuza nezinye eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa.
Ukufaka amayunithi ezisebenza blue fuel, kokubili emakhaya abo nasemaHholo izakhiwo zezimboni.
Amatilosi ukulungisa kufanele ifakwe?
Ukuze siwuqede lowo msebenzi kahle, abasebenzi kumelwe abanale mishini:
ukuqhuma-ubufakazi izibani, kanye nezinye izinto zokuvikela;
amathuluzi sokunquma ezingeni igesi lokuhlushwa isakhiwo zezimboni noma esinye isakhiwo;
ithuluzi ngokusebenzisana amapayipi, futhi izingxenye ezivamile esikhululekile, ngayo nefunda ngayo kungenzeka ukuba afeze ukulungiswa;
Izinto zokuvala umoya kanye zokugcoba.
Wonke lo msebenzi owenziwa abezimo eziphuthumayo, ngempela eqoshiwe. imibhalo Technical kumele igcinwe endaweni yokugcina isikhathi esithize.
Izici umsebenzi nemisebenzi abaphendulile eziphuthumayo Vodokanal
Isikhathi esining impela, ezikhungweni zezimboni, othelawayeka emaphakathi, emizini yabazalwane noma emaxhaphozini uma emakethe iphula kwamapayipi amanzi noma indle odla. Uma umonakalo akunandaba, kungenzeka ubhekane nazo kuphela. Nokho, zikhona izikhathi lapho kudingeka eziphuthumayo ukwelashwa amanzi inkonzo isitshalo.
Brigade Ochwepheshe enze le misebenzi elandelayo:
Ngokushesha ukusabela esicelweni.
Sungula imbangela yokwehluleka futhi uqede ke: ukuwohloka noma ipayipi ukudabuka, esikhundleni izingxenye umugqa.
Susa okuvimba esikhulu amapayipi izinhlelo.
Ixhunyiwe kwi-alondoloze nemithombo yamanzi esakhiweni noma unqamule ke.
Feza kuhlelwe ukulawula izinga amanzi kwezakhiwo zokuhlala kanye okungezona zokuhlala.
Izimiso Operation Rescue Brigade
Le sevisi wenza imisebenzi ehlukahlukene. Nokho, injongo eyinhloko nemisebenzi yayo ukuze kusindiswe ukuphila kwabantu kanye nezempilo, wabanjwa esimweni esiphuthumayo (ukuqhuma Izakhiwo zokuhlala nendawo okungezona zokuhlala, ukuzamazama komhlaba, imililo, izikhukhula kanye nezinye izinhlekelele).
Emsebenzini walo, izisebenzi u-opharetha wenethiwekhi kufanele aqondiswe lezi zimiso:
kokucindezelwa efeza imisebenzi yokuzithandela ukutakula;
ububele, wokubhekela izidingo zomuntu kanye kuqala ukuphila komuntu;
ekuqinisekiseni ukuphepha kwabasebenzi kanye nabanye abakhona phakathi izenzakalo;
ukugcwaliseka imisebenzi nge umonakalo okuncane imvelo.
Ngamunye isikhulu lamabutho kumele bazi futhi benza imisebenzi yabo kahle.
Imisebenzi esemqoka abahambisi bosizo
Umsebenzi oyinhloko, okuyinto lokufeza wokutakula zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo, kuba ngqo iqhaza kumpendulo eziphuthumayo. Uma sicabangela imisebenzi yenhlangano emelelwa kabanzi, phakathi kwabo kungathiwa elandelayo:
Isilawuli unomphela phezu izinto ezinobungozi;
Ukuvikelwa insimu futhi izakhamuzi nesenzakalo ingozi yomuntu ezenziwe noma imvelaphi yemvelo;
Wonke umuntu kumele azi zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo ifoni. Okufanayo zonke izinhlangano inombolo 112. Nokho, inkonzo ngayine inezidingo zayo inombolo yefoni yayo:
Fire - 101 (01);
Ambulensi - 103 (03);
Amaphoyisa - 102 (02);
isevisi igesi - 104 (04).
Njengoba for izinombolo Electricians nabasebenzi amanzi Umbuso indawo, kumelwe bafunde emzini lapho wena uhlala khona, ngoba abanayo ifoni ezivamile.
Comfort nokonga nge uhlelo Smart Home
Boilers "Bucks": ukubuyekezwa kanye imiyalelo ukusetshenziswa
Kungani ngingakwazi ulahle amaphepha abo kulo doti?
I control panel "Astra-812": imanuwali
Ukubeka up and yokuxhuma circuit motion inzwa ukukhanya
Valve kagesi ngoba amanzi: izinhlobo kanye nencazelo
Indlela ewusizo amakhiwane? Kuzuze abesifazane fresh futhi isigaxa samakhiwane omisiwe
Timur Bulatov (Isayev): Biography, umsebenzi, umkhaya nezinye amaqiniso ezithakazelisayo
Sitolo sekudla lokuphekiwe Pavlodar: Ukubuyekeza, ukubuyekezwa
"Oz": Izibuyekezo balabagxeki movie nezethameli
Clary esikhundleni kusho for ekwelapheni izifo
Yini okumele uyenze uma ingane akafuni ukufunda
Indlela yokwenza umshini ukuze zizosengwa izimbuzi: usayizi wesithombe
Ungathola kanjani i-visa ye-Schengen eMoscow? Uhlu lwamadokhumenti, izindleko, imigomo
"I-Vitix" (i-gel kanye namathebulethi) yokwelashwa kwe-vitiligo: imiyalelo yokusetshenziswa
Kuyini uphawu? Kuyini okukushoyo isimo
Izimbangela, izimpawu kanye nokuphathwa kwe-trichomoniasis